China Screw Yeche Meging Grinder Machina Mugadziri uye Anotengesa | Retool
Screw For Nyama Grinder Machina
Simba Jenareta Zvikamu
Investment kukanda uye machining zvikamu kubva Retool kambani.
Precision kukanda izwi ruzhinji rwekuti uwane chaiyo yekukanda tekinoroji. Kuenzaniswa neyakagadzirwa nejecha kukanda maitiro, saizi yekukanda yakawanikwa nekukanda chaiko yakanyanya uye kupera kwemeso kuri nani. Zvigadzirwa zvinowanikwa nekukanda chaiko zvakapusa uye zvakaomarara, padhuze nekupedzisira chimiro chemativi, ayo anogona kushandiswa zvakananga pasina machina kana aine mashoma mashoma. Iyi inyanzvi yepamusoro muindasitiri yekukanda, uye kushandiswa kwayo kwakanyanya.
Izvo hazvina kungokodzera chete mukukandwa kwemhando dzakasiyana-siyana uye alloys, asi zvakare inogadzira zviyero zvine hukadzika hwehupamhi hwakajeka uye hwemhando yepasi kupfuura dzimwe nzira dzekukanda. Kunyangwe zvakaoma kuisirwa iyo yakaoma, yakakwirira emperature inopesana uye yakaoma kugadzirisa castings nedzimwe nzira dzekukanda dzinogawanikwawo nekutengesa kwekutengesa.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya muvharoji uye pombi, kudzora mvura, muchina wekudya, auto indasitiri, makemikari nemafuta indasitiri nezvimwewo.
Kukanda zvinhu: Isimbi isina simbi, kabhoni simbi, yakadzika alloy simbi, kupisa simbi simbi, abrasion-kupikisa simbi nezvimwe.
Kugadzira maitiro: Silica sol chaiyo kukanda.
Chiyero chakagadzirwa: ASTM, DIN, BS, GB, JIS nezvimwe. Casting WT: 0.003KG-90KG.
Min kukanda rusvingo ukobvu: 1mm. Kukura kwekukanda: 650mm. Kukanda kushivirira: CT4-6, VDG P690 D1 / D2.
Nyika dziri kutumira kunze kwenyika: United States, Canada, Italy, Germany, Japan, Korea nedzimwe nyika.
Brand: Ita zvinhu.
• Kambani yedu ine makore makumi maviri nemapfumbamwe emapombi ekugadzira valve, ruzivo rwevashandi vehunyanzvi uye timu yekugadzira tine rutsigiro rwakasimba.
• Isu tinogona kugadzira zvinoenderana nesampuli kana dhiziri yakapihwa nevatengi. Izvo zvigadzirwa zvine chimiro chakanaka, chakagadzikana uye chakavimbika mhando uye yakasimba quality control. Iye wako waunovimba naye.
• Tinogona kukanda uye muchina mhando dzakasiyana zvigadzirwa zvichienderana nemadhirowa kana samples vatengi vanopa. Kukanda chaiyo yakakwira, uye mhando yakagadzikana.
• Isu tinogaro tungamira yepamusoro pamhando uye isu tinonyatso kutonga maitiro ese ekugadzira maererano ne ISO9001.
• Tinokwanisa kugadzira zvinoenderana neyakajairwa ASTM, DIN, BS, JIS nezvimwe uye tinokwanisawo kupa marudzi ese ekurapa kupisa uye kurapwa kwepasi.
Chikara - Ichi chikwangwani che nyama grinder michina. Vatengi vane yakasimba mhando, kururamisa uye ekunze epasi kurapwa zvinodiwa kune zvigadzirwa. Isu tinoburitsa zvakasiyana siyana maererano nezvinodiwa nevatengi. Mushure megirazi kupukuta zvigadzirwa zvine yakakwira kunyatso uye kutaridzika kwakanaka. Vatengi vedu vanoisa kukosha kwakanyanya pane zvigadzirwa zvedu.
Chikumbiro: Nyama Grinder Machine.
Chiyero chakagadzirwa: ASTM, DIN, BS, GB, JIS nezvimwe.
Casting WT: 0.003KG-90KG.
Min kukanda rusvingo ukobvu: 1mm.
Kukura kwekukanda: 650mm.
Kukanda kushivirira: CT4-6, VDG P690 D1 / D2.
Simba redu: • Retool Kambani ndeyakagadzira yekudyara nekukanda matanho, ayo akagadzwa muna 1994. Iriwo rekutanga batch yemahara ekukanda mabhizinesi muChina. Inowanikwa muZhaoxian County, Shijiazhuang City, padyo ne Tianjin Port uye Qingdao Port, ine mafambiro ari nyore.
• Yedu yezvigadzirwa renji inovhara mavharuvhu, mavheji zvikamu, chikafu michina yezvikamu, pombi zvikamu, peturuleum indasitiri zvikamu nezvimwe .. Tinokwanisa kuburitsa zvinoenderana nesampuli kana dhiziri inopihwa nevatengi. Izvo zvigadzirwa zvine chimiro chakanaka, chakagadzikana uye chakavimbika mhando uye yakasimba quality control.
• Tinokwanisa kugadzira zvinoenderana neyakajairwa ASTM, DIN, BS, JIS etc. Uye isu tinokwanisawo kupa ese marudzi ekupisa kupisa uye kwepasi kurapwa.
• Inonyanzvi uye neruzivo boka revatambi, michina yepamberi, nzira yemazuva ano uye inoshanda yekutarisira, yakavimbika mhando uye mutemo wekutarisira mutengi semoyo webasa uchaona kusimudzira uye kusimba kweRetool. Isu tichagara tichishandira pamwe nevatengi vedu kuvandudza musika mutsva uye zvigadzirwa zvitsva kuitira kugutsa vatengi vedu uye nzanga. Retool inotarisira kubatana newe.
Yepfuura: Spiral Shaft Yokurunga Bhinzi Nembudzi
Inotevera: Carbon Simbi Pump Muviri
Chikafu Mashini Ekukandira Zvikamu
Screw Zvikamu Zvekudya Zvishongedzo
Spiral Shaft Yokurunga Bhinzi Nembudzi
Stainless Simbi Chikamu Chemuviri Cheyenyama Grinder Mac ...